IHuawei izakuveza ifowuni esongwayo kwi-MWC 2019 | I-Androidsis
U-Huawei usikhankanya ngomnyhadala ngoFebruwari 24 kwi-MWC
I-MWC 2019 e-Barcelona iqala ukubonakala. Iimpawu ezininzi sele ziqinisekisile ubukho bazo kumnyhadala owaziwayo wokunxibelelana ngefoni, njenge-LG, ethembisa ukusishiya neendaba ezinomdla, okanye uSony, Oko kuyakufika ngesiphelo saso esitsha esihlaziyiweyo phakathi kwezinye iifowuni. IHuawei iyakubakho kumsitho e-Barcelona. Uphawu lwesiTshayina sele lubhengeze intetho yalo yokuqala.
Ukusukela ukuba uphawu lwaseTshayina ngoku lufakele ipowusta ebhengeza ubukho bayo kwi-MWC 2019. IHuawei ke iya kuba kulo msitho kwaye sele kukho intelekelelo malunga nento enokuziswa yinkampani. Uninzi lucebisa ukuba iya kuba kukusonga kwe-smartphone eya kupapashwa.
Kwiinyanga ezidlule Kuyatshiwo ukuba iHuawei inokubonisa ukusonga kwayo kwi-MWC 2019. Kodwa kancinci kancinci kubonakala ngathi kuyaqinisekiswa. Okwangoku Uphawu lwaseTshayina lusibizela umsitho nge-24 kaFebruwari. Ngumhla ophambi kwesiqalo esisemthethweni, kodwa uninzi lweempawu zisebenzisa ithuba lokwenza iindaba zazo.
Kwisimemo esithunyelwe litywina laseTshayina, onokuthi ulibone kwasekuqaleni, sinokubona isixhobo esibonakalayo esisongekayo. Ukongeza ekukhanyeni, enokuba sisikrini kumacala omabini. I-engile yokuvula ayinakwenzeka ukuba ivele kwifowuni eqhelekileyo. Ke ngoko kuyamangalisa ukuba iya kuba yifowuni yakho yokusonga.
Le ntetho iya kufika kwiintsuku ezimbalwa kamva kunaleyo yokusonga i-Samsung, oko kuyakwenzeka ngoFebruwari 20. Ke ngoko, Ubukho beSamsung kwi-MWC 2019 kubonakala ngathi abukho mbuzo. Yintoni eshiya ukubalasela kweempawu ezinje ngeHuawei ngeemodeli zazo. Asazi ukuba kuya kubakho iifowuni ezingakumbi ngaphandle kwale yakhe.
Ngayiphi na imeko, Nge-24 kaFebruwari ngo-14: 00 emva kwemini kukho idinga noHuawei. Uphawu lwesiTshayina luza kubonisa i-smartphone yalo entsha, enokuba siselfowuni esongwayo. Siza kujonga ingqalelo kulwazi olutsha olufika malunga nesi sixhobo kunye nale ntetho yohlobo. Ucinga ukuba baya kubonisa ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » U-Huawei usikhankanya ngomnyhadala ngoFebruwari 24 kwi-MWC
IVivo V15 Pro izakufika nekhamera kathathu kunye ne-pop-up sensor [iPosta esemthethweni]
Mkhulule nge-5-yamaphephadonga aphefumlelweyo avela kwiParallax 3D Wallpaper